Ngwa ndị ọzọ na-ebuli, ụgbọ ala na ụlọ ahịa na-ere ahịa ndị na-ebugharị | Jack jack
Ulo > Ngwaahịa > Akụrụngwa ndị ọzọ na-ebuli
Ogo nke ụgbọ ala creeper dị ala, nke na-ekwe nkwa ikike okporo ụzọ ọ dị mma ma nwee ike ịgafe na ala nke ụgbọ ala. Ọ dị mma maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ụgbọ ala niile na ọ nweghị ike ọ bụghị naanị maka iji ụlọ, kamakwa maka ụlọ ahịa 4S.
A na-eji ụgbọ ala creeper mee nke ígwè, nke nwere ike ibute oke ibu nke 300 lbs ma enwere ike iji ya nwoke toro eto mee ya. A na-eji agba kpuchie elu iro, nke nwere ike igbochi nchara ma mụbaa ndụ.
Enwere wiil isii zuru ụwa ọnụ na ala nke ụgbọ ala creeper nke na-agbanwe na ekwentị. You nwere ike ijikwa ụgbọ ala creeper ka ịlele akụkụ niile nke ụgbọ ala chassis na-enweghị ịkpọlite ​​akụkụ ọ bụla.
Ezubere ndị ahịa a maka ịgbatị, na-akpụgharị, na-awụda, na stating.